Otu esi edozi njehie ọkwọ ụgbọ ala WIA | Nzukọ mkpanaka
Otu esi edozi njehie ọkwọ ụgbọala WIA
Ignacio Sala | 24/09/2021 12:00 | Nkuzi
Ọ bụrụ na ị na -eji ngwa nbipute ma ọ bụ nyocha na -ejikọ na kọmputa gị mgbe niile, ị nwere ike ihu nsogbu metụtara ọkwọ ụgbọ ala WIA. N'isiokwu a, anyị ga -akọwara gị, kedu ihe bụ Njehie ọkwọ ụgbọ ala WIA, kedu koodu njehie WIA yana kedu azịza maka njehie niile nke onye nbipute na ọkwọ ụgbọ nyocha nwere ike igosi anyị.
Njehie nke ijikwa WIA ọ bụ nyocha nyocha ma ọ bụ mperi ngwa nbipute, njehie nke n'ọtụtụ oge na -akpọ anyị oku ka anyị na onye na -ebi akwụkwọ na -emekọrịta ihe iji dozie ya. N'oge ndị ọzọ, ọ na -akpọ anyị oku ka anyị degharịa ndị ọkwọ ụgbọala ngwa ngwa ma ọ bụ malitegharịa ọkwọ ụgbọ ala WI ozugbo
Otu esi ejikọ ekwentị na ngwa nbipute
1 Kedu ihe ọkwọ ụgbọ ala WIA
2 Koodu njehie WIA na azịza ha
3 Ngwọta ndị ọzọ maka njehie ọkwọ ụgbọala WIA
3.1 Malitegharịa ọrụ ọkwọ ụgbọ ala WIA
3.2 Gbanwee ọrụ ọkwọ ụgbọ ala WIA
3.3 Rụgharịa ngwanrọ ngwa nbipute
3.4 Weghachi Windows
Kedu ihe ọkwọ ụgbọ ala WIA
WIA na -anọchite anya nnweta foto Windows, ọkwọ ụgbọ ala nke Microsoft mepụtara na -enye ohere nkwukọrịta na ngwa nbipute ma ọ bụ nyocha na anyị arụnyere na kọmpụta anyị ma ọ bụ na netwọkụ, lelee na ọ naghị arụ ọrụ mgbe niile na ngwanrọ ngwa nbipute. Ozi kachasị emetụta onye ọkwọ ụgbọ ala a na -egosi ozi na -esonụ:
Ịchọrọ onye ọkwọ ụgbọ ala WIA iji ngwaọrụ a. Biko wụnye ya na CD nwụnye ma ọ bụ webụsaịtị wepụta ya wee nwaa ọzọ.
Ozi a na -agwa anyị na enwere nsogbu nkwukọrịta na ngwa nbiputeMa ọ bụ n'ihi na emebiwo ọkwọ ụgbọ ala Windows yana / ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọ ala nke onye na -emepụta ngwa nbipụta anaghị arụ ọrụ dịka ha kwesịrị. Ngwọta kachasị mfe ga -abụ ịmalitegharị mmemme ngwa nbipụta, agbanyeghị, nke a anaghị adịkarị.
Ndị na-ebi akwụkwọ 4D: Kedu ihe ha bụ na gịnị ka ha nwere ike ịme?
Koodu njehie WIA na azịza ha
N'okpuru, anyị na -egosi gị ndepụta ụdị njehie niile Windows nwere ike igosi anyị Mgbe ị nwere nsogbu nkwukọrịta na ngwa nbipute ma ọ bụ nyocha. Na -esote koodu njehie, a ga -egosipụta ihe ngwọta maka nsogbu na koodu egosiri mgbe koodu mperi apụtaghị.
WIA ERROR _ _ BUSY Ngwaọrụ nọ n'ọrụ. Mechie ngwa na -eji ngwa ma ọ bụ chere ka ọ gwụchaa wee nwaa ọzọ. 0X80210006
WIA _ ERROR _ MGBE _ emepe Otu ma ọ bụ karịa nke mkpuchi ngwaọrụ mepere emepe. 0X80210016
Nkwukọrịta nke _ Ngwaọrụ nwere mmejọ _ SITE WIA _ Njehie nkwukọrịta na ngwaọrụ WIA. Hụ na agbanyere ngwaọrụ ma jikọọ ya na kọmpụta. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ ka na -aga n'ihu, kwụpụ ma jikọgharịa ngwaọrụ ahụ na kọmputa. 0x8021000a
Ngwaọrụ ezighi ezi WIA _ _ _ akpọchiri Akpọchiela ngwaọrụ ahụ. Biko mechie ngwa na -eji ngwaọrụ a ma ọ bụ chere ka ọ gwụchaa wee nwaa ọzọ. 0x8021000d
WIA _ _ MGBE EGO NKE NA _ _ DRIVER Onye ọkwọ ụgbọ ala atụfuola ihe dị iche. 0X8021000E
ERROR _ General WIA _ _ Njehie amabeghị na ngwaọrụ WIA. 0X80210001
WIA ERROR _ _ HARDWARE CONFIGURATION _ _ ezighi ezi Enwere ọnọdụ adịghị mma na ngwaọrụ WIA. 0C
Nye iwu mba _ njehie na -adịghị mma _ SITE WIA _ Ngwaọrụ anaghị akwado iwu a. 0X8021000B
WIA ERROR _ NZỌWA ECHICHE NA -ADỊGHỊ _ _ _ Ọ BỤGHỊ Nzaghachi onye njikwa adịghị mma. 0X8021000F
WIA ERROR ITEM _ _ _ WERE Ewepụla ngwaọrụ WIA. Ọ dịkwaghị. 0X80210009
WIA _ ERROR _ LAMP _ Gbanyụọ Agbanyụrụ ọkụ onye nyocha. 0X80210017
MAKIMUMUM PRINTER KWESỊRỊ KỌRỌ OF _ _ ERRORS _ _ FROM _ WIA Akwụsịre ọrụ nyocha n'ihi na ihe nbipute / Endorser ruru uru kachasị maka WIA IPS PRINTER ENDORSER COUNTER na _ _ edozigharịrị na _ _ 0. Njirimara a dị site na Windows 8. 0X80210021
ỌTỤTỤ ebe / njehie _ SITE WIA _ Mperi ihe nchọgharị mere n'ihi ọnọdụ font dị ọtụtụ. Njirimara a dị site na Windows 8. 0X80210020
WIA ERROR _ NO _ CONNECTION Ngwaọrụ anọghị n'ịntanetị. Hụ na agbanyere ngwaọrụ ma jikọọ ya na kọmpụta. 0X80210005
AKWỤKWỌ MGBE WIA _ _ _ EGO Enweghị akwụkwọ na akwụkwọ nri / tray akwụkwọ. 0X80210003
WIA _ ERROR _ PAPER _ JAM A na -akpachi akwụkwọ n'ime nri onye na -enye nri / tray akwụkwọ. 0X80210002
Mpempe akwụkwọ - njehie _ SITE WIA _ Nsogbu a na -akọwaghị ekwupụtala na nri / tray mpempe akwụkwọ onye nyocha. 0X80210004
_ WIA _ NA -EKWUKWU _ EZIGBO Ngwaọrụ a na -agbanye. 0X80210007
WIA ERROR _ _ INTERVENTION Enwere nsogbu na ngwaọrụ WIA. Hụ na agbanyere ngwaọrụ; online yana na ejikọrọ eriri ndị ahụ nke ọma. 0X80210008
WIA _ S NO DEVICE _ _ _ E Nwere Enweghị ngwaọrụ nyocha. Jide n'aka na ngwaọrụ ahụ dị n'ịntanetị; ejikọrọ na kọmpụta yana ị nwere ọkwọ ụgbọala ziri ezi etinyere na kọmpụta ahụ. 0X80210015
Best agba ma ọ bụ nwa na-acha ọcha na multifunction laser ebi
Ngwọta ndị ọzọ maka njehie ọkwọ ụgbọala WIA
Ọ bụrụ na ị bịarutela ngalaba a, ọ bụ maka na n'ime koodu njehie m gosipụtara gị na ngalaba nke mbụ, egosighi nke pụtara. Ọ bụrụ otu a, mgbe ahụ anyị ga -egosi gị ọtụtụ ụzọ chọrọ ịnweta Ọrụ Windows, yabụ anyị ga -emerịrị ya kpachara anya n'oge ime mgbanwe ndị anyị na -egosi.
Malitegharịa ọrụ ọkwọ ụgbọ ala WIA
Dị ka m na -ekwu mgbe niile, Malitegharịa ekwentị n'oge kwesịrị ọnụ ahịa abụọ. Malitegharịa ekwentị anyị na PC anyị mgbe niile bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma maka ngwaọrụ anyị iji gaa n'ihu na -arụ ọrụ dị ka ụbọchị mbụ.
Mgbe ụfọdụ onye ọkwọ ụgbọ ala WIA nwere ike ịbụ na -akọwahie ihe ụfọdụ iwu ọrụ yana, n'agbanyeghị ole anyị malitegharịrị kọmputa ahụ, ọ ga -aga n'ihu na -arụ ọrụ.
Usoro nke mbụ anyị kwesịrị ịnwale bụ a malitegharịa ọrụ onye njikwa ozugbo site na Ọrụ Windows. Iji mee usoro a, anyị ga -emerịrị usoro ndị m kọwara n'okpuru:
Nke mbụ, banye na igbe nchọta Windows wee pịnye "services.msc" na -enweghị akara ngosi iji nweta Ọrụ Windows.
Ozugbo emepere windo na -egosi Ọrụ Windows nke na -arụ ọrụ n'oge ahụ, anyị na -aga Nnweta foto Windows (WIA site na mbido ya n'asụsụ Bekee).
Iji chọta ya ngwa ngwa, a na -atụ aro ka ịpị kọlụm Aha ka ewepụta ọrụ niile n'usoro mkpụrụedemede yana ọ dị mfe ịchọta ọrụ a.
Na -esote, anyị na -etinye òké n'elu ọrụ ahụ Nnweta foto Windows, anyị pịa bọtịnụ òké aka nri wee họrọ nhọrọ Malitegharịa ekwentị.
Gbanwee ọrụ ọkwọ ụgbọ ala WIA
Usoro a dị naanị mgbe anyị nwere nsogbu arụmọrụ na onye njikwa WIA, ya bụ, mgbe enweghị nsogbu ọzọ ekwuru n'elu, nsogbu a na -edozi site na iso onye nbipute na -emekọrịta ihe (ịgbanye ya, iwepu akwụkwọ mgbochi, ịlele akwụkwọ ...)
Ihe mbụ ị ga -eme bụ ịnweta igbe nchọta Windows wee pịnye "services.msc" na -enweghị nhota iji nweta Ọrụ Windows.
Ozugbo emepere windo na -egosi Ọrụ Windows nke na -arụ ọrụ n'oge ahụ, anyị na -aga Nnweta foto Windows.
Ọzọ, anyị pịa bọtịnụ òké aka nri na anyị họrọ Njirimara.
Na taabụ Banye, anyị na-ahọrọ Akaụntụ sistemụ mpaghara na -enyochakwa igbe Kwe ka ọrụ ahụ na desktọọpụ mekọrịta.
N'ikpeazụ anyị pịa anabata anyị malitekwara ngwa anyị ọzọ.
Ozugbo anyị malitegharịrị kọmputa anyị, njehie a adịlarị ekwesịrị idozi ya.
Rụgharịa ngwanrọ ngwa nbipute
Dịka m kwuru, njikwa a na -arụkarị ọrụ, ọ bụghị oge niile, na -eji ngwa nbipute. Agbanyeghị na Windows nwere ike ịmata ọtụtụ ndị na -ebi akwụkwọ na -ejikọ na kọmpụta Windows 10, naanị wụnye ndị ọkwọ ụgbọala bụ isi ka ha nwee ike ibipụta na i scanomi.
Ọ bụrụ na ọ bụ nyocha na ngwa nbipute, agaghị etinye ndị ọkwọ ụgbọala abụọ ahụ mgbe niile. N'ihi nke a, a ga -amanye anyị ịwụnye ngwanrọ dị arọ nke ndị na -emepụta ngwa nbipụta, sọftụwia na -ejupụta ndị otu anyị ngwa na -abaghị uru nke anyị na -agaghị eji. A na -ahụkarị ụdị ngwa a na laptọọpụ ndị a na -ere ma a na -akpọ ya Bloatware.
Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịchọta nsogbu nke ijikwa WIA, naanị azịza anyị nwere bụ degharịa windo site na ọkọ. Agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na Windows na -enye anyị ohere iweghachi Windows site na iwepu ọdịnaya niile wee hapụ sistemụ ahụ ka etinyere ya, ọ ga -ekwe omume na agaghị ebipụta nsogbu onye nbipute ahụ.
Mgbe ị na -eweghachi Windows site na ọkọ, anyị ga -ewepụ ihe mkpofu niile anyị kwakọbara kemgbe oge ikpeazụ anyị haziri ya, yabụ ọ ga -enyekwa anyị ohere iweghachite arụmọrụ anyị furu efu kemgbe ọtụtụ afọ.
Anyị ga -eburu n'uche na nke mbụ anyị ga -emerịrị weghachite ọdịnaya niile nke anyị chekwabara na kọmpụta anyị, ma ọ bụ na nchekwa nchekwa igwe ojii ma ọ bụ jiri ya sistemụ nchekwa karịa Windows na -enye anyị ohere nke ahụ na -enye anyị ohere idetuo data niile kachasị mkpa nke akụrụngwa anyị, gụnyere nhazi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nkuzi » Otu esi edozi njehie ọkwọ ụgbọala WIA
Otu esi achọta aesụ ma mee mmanụ a honeyụ na Minecraft
Otu esi ehichapụ akaụntụ Aliexpress gị, site na nzọụkwụ